Mpitondra sainam-pirenena romana TAROM dia namoaka fatiantoka 38 tapitrisa € tamin'ny 2017
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mpitondra sainam-pirenena romana TAROM dia namoaka fatiantoka 38 tapitrisa € tamin'ny 2017
Mpitondra sainam-pirenena romana TAROM dia namoaka fatiantoka 172 tapitrisa RON (EUR 38 tapitrisa) tamin'ny taona 2017, satria nanova mpitantana ankapobeny dimy ny kaompaniam-pitaterana.
Tamin'ny taon-dasa dia ny taona fahafolo nisesy raha toa ka maty ny orinasam-panjakana. Ny vokatra ratsy dia avo telo heny noho ny tamin'ny 2016 raha nahitana fatiantoka RON 47 tapitrisa (10 tapitrisa EUR) ny orinasa.
Ny fidiram-bolan'ny orinasa dia nidina ihany tamin'ny taon-jato teo ho eo amin'ny 4.5%, ka hatramin'ny RON 1.025 miliara (EUR 220 tapitrisa).
TAROM dia nitondra mpandeha 2.35 tapitrisa tamin'ny taon-dasa, laharana fahefatra amin'ireo kaompaniam-pitaterana miasa ao Romania, ao aorinan'ny mpandraharaha lafo Wizz Air, Blue Air ary Ryanair. Ny fitantanana vaovaon'ny orinasa dia nametraka fepetra fanarenana maro toy ny fanofana fiaramanidina Boeing B737-800 roa ary fanombohana zotra vaovao anatiny sy iraisam-pirenena.
Momba an'i TAROM
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, mitondra orinasa TAROM, no mpitatitra saina ary zotram-piaramanidina tranainy indrindra any Romania, monina ao Otopeni akaikin'i Bucharest. Ny foibeny sy ny foibeny dia ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Henri Coandă. Ity dia kaompaniam-piaramanidina faharoa lehibe indrindra miasa any Romania mifototra amin'ny toerana iraisam-pirenena, sidina iraisampirenena ary fahatelo lehibe indrindra refesina amin'ny haben'ny fiaramanidina sy ny mpandeha entina.
Ny anarana marika dia fanafohezana ny Romanian: Transporturile Aeriene Române (Romanian Air Transport). Fito amby sivifolo isan-jato mahery (97.05%) an'ny TAROM no an'ny governemanta romanianina (minisiteran'ny fitaterana).
Taorian'ny fianjeran'ny fitondrana kaominista tamin'ny 1989, ny zotram-piaramanidina, izay nahavita fiaramanidina 65 misy karazana enina fototra, dia afaka nahazo fiaramanidina maro hafa vita amin'ny tandrefana. Tamin'ny taona 1993, TAROM dia nanolotra sidina lavitra ho any Montreal sy Bangkok amin'ny alàlan'ny fiaramanidina Ilyushin Il-62 sy Airbus A310.
Nandritra ny taona 1990, ny TAROM dia nanolo ny fiaramanidina lava Boeing 707 sy IL-62 tamin'ny Airbus A310 (ny Il-62 farany namidy tamin'ny taona 1999). Tamin'ny taona 2001, nanafoana ny serivisy fanangonan-tsambo lavitra any Bangkok sy Montreal ny zotram-pitaterana an'habakabaka ary koa namarana ny serivisy ho any amin'ny toeran-kaontinanta sinoa sisa tavela any Beijing tamin'ny 2003, Chicago tamin'ny 2002, ary New York City tamin'ny 2003.
Nofoanan'ny TAROM ny asa fanompoana an-trano mahantra any Craiova, Tulcea, Caransebeș, ary Constanța, ary nampifantoka ny asany tamin'ny fanompoana ho any amin'ny toerana lehibe any Eropa sy Moyen Orient. 2004 no taona voalohany nahasoa tamin'ny folo taona lasa.
New World Travel: New York dia manao dingana mankany amin'ny ho avy maitso
Ireo tompon'andraikitra misahana ny fizahantany any Antigua sy Barbuda dia mankalaza ny Herinandron'ny Karaiba CTO any New York